Iimpawu Zekhaya | January 2022
Iingcamango ezingenanto ze-Fireplace-Indlela yokuThola indawo yoMlilo ongasebenziyo
Ke unendawo yokubasa umlilo engasebenziyo-kodwa oko akuthethi ukuba ayisebenzi kwaphela. Nazi iindlela ezili-16 zokuhombisa indawo yomlilo engasebenziyo.
Ngephepha loqhakamshelwano lweemarble ezili-9 kunye nentonga kwi-faux backsplash, eli khitshi lokurenta laguqulwa ngokupheleleyo.
Uhlaziya njani igumbi elincinci leendwendwe.
20 'Fixer Upper' Makeovers Ezinyulu #Iinjongo zoKitchen
Ngubani owaziyo ukuba ikhonkrithi yenze i-chic backsplash enjalo?
I-6 Tricks yokwenza Igumbi elimnyama Liziva likhanya-Iingcamango zeGumbi elingenasiphelo
Ngaba unalo igumbi elingafumani kukhanya kwendalo? Sukoyika. Ezi zimvo ziya kukunceda wenze igumbi lizive liqaqambile kwaye lihlaziyiwe.
Ukwenza iiyure ezingama-24 kwiNursery
Thatha ukhenketho lwe-East Coast Creative's 24-iiyure ze-nursery projekthi kunye noLowe.
Ngaba Abazalwana bePropathi bayinyani? -Ngasemva kweZinto zokuBoniswa kwePropathi yabazalwana
Umnini khaya wesithuba esinye esiza kudlalwa kubazalwana bePropathi uchaza indlela eyakhethwa ngayo indlu yakhe njengokhuthazo lwesiqendu kwaye kwenzeka ntoni kanye xa kusenziwa ifilimu.
Ezi Makeovers zegumbi lokulala ziya kukuWow
Uhlaziyo lwegumbi lakho lokulala eliza kukukhuthaza.
Igaraji laseDingy liguqulwe laba lelona Gumbi lokuGcina liBalaseleyo
Ukuguqula igaraji egudileyo ibe yindawo eqaqambileyo, eyilwe kakuhle kwigumbi lokulala elinokubonakala ngathi ngumsebenzi wamabhongo-mhlawumbi nokuba awunakwenzeka kuloo nto-kodwa ngenxa yexesha elincinci kunye nokuzinikezela, izihlobo ezizezona zibalaseleyo (eziyilo noyilo / ikhaya lokulungisa i-duo, ewe) lenze ukuba eli phupha libe yinyani. U-Lindsay Hollinger kunye no-James Burial's Insta-Airbnb eyaziwayo, efumaneka phantsi kwe hashtag #ThatDesertHouse nakwi @casajoshuatree, yatshintshwa yimpambano ukusuka kwinto enkulu ukuya kubukhazikhazi obugqithisileyo — ngakumbi igaraji yajika yangumgangatho ophezulu. Ngokuphathelele kwinkqubo yabo, uLindsay utyhile ukuba eyona nto bajolise kuyo kweli candelo lekhaya yayingekokuyiguqula ibe yinkosi.
Udliwanondlebe noRobert Brown-Uyilo lwangaphakathi lukaRobert Brown
Umyili uyacacisa indlela awayehombise ngayo indlu yaseAtlanta yomfazi othanda ii-sequins kunye nomyeni othanda ukungathathi cala.
Abazalwana bePropati kunye noBrad Pitt bamangalisiwe baguqula iNdlu yeeNdwendwe kwiNkulumbuso ye-HGTV's 'I-Celebrity IOU'
Ngexesha le-premiere yomboniso omtsha we-HGTV, 'I-Celebrity IOU,' umdlali weqonga u-Brad Pitt ucofa i-Property Brothers ukumnceda ukuba enze iprojekthi ekhethekileyo yokulungiswa kwegcisa lakhe lobugcisa kunye nomhlobo we-30 iminyaka, uJean Black.
Izinto ezinokuthi zinike iNdlu-Into ekufanele ukuba uyinike iifoto zeMovie
Abaqulunqi uPebeebe noJim Howard bayile le ndlu iphefumlelwe yifilimu, Into enokuthi uyinike. Nantsi imbonakalo yangaphakathi kuzo zonke izingqinisiso ezintle kumdlalo bhanyabhanya.
Quartz Vs. usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows Imiphezulu yeetafile zeGranite-Eyona nto iphambili kwiKhitshi yokuBala
Kulula ukukhathazeka malunga nesigqibo ngasinye kulungiso lwekhitshi, ngakumbi apho kufuneka kukhethwe iitafile: iquartz okanye igranite. Nantsi into ekufuneka uyazi.
Ngaphakathi kuFrank Lloyd Wright Prefab e-Upstate New York -Indlela uSara Anderson-Magness ahlaziye ngayo uFrank Lloyd Wright
Xa umyili uSarah Magness ekhubeke kwindlu kaFrank Lloyd Wright Usonia, eyayisahlala ngabanini bayo bokuqala, kwimeko efanayo xa uWright wavuma izicwangciso phantse kwiminyaka engama-60 eyadlulayo, wayihlutha.
Iingcamango ezimbini zeDishwasher Kitchen
Ukuba nesitya esingaphezulu kwesitya esinye kuya kusiba yinto eyaziwayo. Nantsi indlela abayili abenza ngayo ukuba isebenze nalo naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali.
Ikhaya likaJames Van Der Beek iBeverly Hills lifumene nje iHiggge Upgrade kwiTammy Price
UJames noKimberly Van Der Beek bathethe ne-Architectural Digest malunga nekhaya labo elitsha, apho bahlala khona nabantwana babo abahlanu. Kwinqanaba leprojekthi yayinguTammy Ixabiso leZazisi zeZazisi.
Ukulungiswa kweKhaya eliDala-Phambi nasemva koTshintsho lweKhaya
UFrank noSherry Fontana baguqula amakhaya amadala ngomboniso wabo omtsha 'weDowntown Shabby.'
Ikhaya 'leFixer Upper' elithengiswayo-Ixesha lesine 'leFixer Upper' kwiNtengiso
Umnini welinye lamakhaya e-Chip kunye noJoanna Gaines abenzele ixesha lesine le-'Fixer Upper 'bakwimakethi.
U-Kate Upton waLungisa ngokufihlakeleyo iKhaya likaDade wakhe-uChristie Upton waseMelbourne uQeqesho lwasekhaya
Kwisiqendu sam samva se-My Houzz, i-supermodel iyothusa udadewabo, uChristie, ngokulungiswa kwekhaya lakhe laseFlorida.
Ngaphakathi kwindlu yokubonisa ye-2021 Kips Bay Palm Beach -Izimvo zoyilo ezivela kwiNdawo yokubonisa ye-Florida
Kulo nyaka, abaqulunqi abangamashumi amabini abavela kwilizwe liphela behle kwi-4,400-square-foot-villa villa kwisitayile se-2021 Kips Bay Palm Beach Showhouse, kwaye bayiguqula ngokupheleleyo phantsi kweenyanga ezintathu.
izibane ezinkulu zangaphandle zamakhandlela
iindawo zeOlimpiki emva koko nangoku
isihlalo sefestile se-bay
I-adam levine isitya esikhulu
Umahluko phakathi kwe-plaid kunye ne-tartan